PDF ကိုဘယ်လိုခွဲခြားရမလဲ - အွန်လိုင်းပေါ်မှာလုပ်ဖို့အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုများ။ Gadget သတင်း
ပုံစံ PDF ဖိုင်ရယူရန် မကြာသေးမီနှစ်များအတွင်းအချက်အလက်များကိုလွယ်ကူစွာမျှဝေနိုင်ခြင်းသည်စံသတ်မှတ်ချက်တစ်ခုဖြစ်လာသည်။ ၎င်းသည်၎င်း၏ဘက်စုံအသုံးပြုနိုင်မှုနှင့်စာရွက်စာတမ်းဖန်တီးသောအခါပြုလုပ်သောချုံ့ခြင်းများအတွက်ဖြစ်သည်။ နေ့ရောညပါကွန်ပျူတာများနှင့်မိုဘိုင်းပစ္စည်းများတွင်ပိုမိုအသုံးပြုသည်မှာသေချာသည်။
၎င်းသည်အဓိကအားဖြင့်ဖန်တီးထားသောစာရွက်စာတမ်းပုံစံကိုထိန်းသိမ်းရန်ခွင့်ပြုရန်ဖြစ်သည်။ သို့မှသာအခြားသူများကိုဝေမျှသောအခါ၎င်းစတိုင်၊ ပုံ၊ အရွယ်အစား၊ ပုံစံသို့မဟုတ်အရွယ်အစားစသည့်၎င်း၏စရိုက်လက္ခဏာများမပျောက်သွားစေရန်ဖြစ်သည်။ ငါတို့လိုချင်ရင်ကော PDF စာရွက်စာတမ်းများကိုအပိုင်းပိုင်း ခွဲ၍ဥပမာအားဖြင့်၊ လူတစ် ဦး ချင်းစီကိုသီးခြားအပိုင်းအစတစ်ခုကိုပို့ပေးမလား။ စာဖတ်ခြင်းကိုဆက်လုပ်ပြီးသင်မည်သို့ပြုလုပ်ရမည်ကိုလေ့လာပါလိမ့်မည်။
အခြေခံအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည် PDF စာရွက်စာတမ်းများကိုခွဲဝေခြင်းအတွက်နည်းလမ်းနှစ်ခုကိုခွဲခြားနိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့တွင် priori သည်အရိုးရှင်းဆုံးနှင့်အမြန်ဆုံးနည်းလမ်းဟုထင်သောအရာကိုရှိသည် ကျွန်ုပ်တို့၏ကွန်ပျူတာတွင်ထည့်သွင်းထားသောပရိုဂရမ်တစ်ခုကိုအသုံးပြုပါ အဆိုပါဌာနခွဲဖျော်ဖြေနိုင်ရန်အတွက်, ဒါမှမဟုတ်၏ ၀ ဘ်ဆိုဒ်သို့စာရွက်စာတမ်းများတင်ခြင်းအားဖြင့်အလုပ်လုပ်သောအွန်လိုင်း ၀ န်ဆောင်မှုကိုအသုံးပြုပါ မူရင်းစာရွက်စာတမ်းမှမည်သည့်စာမျက်နှာများကိုကျွန်ုပ်တို့ထုတ်ယူလိုသည်ကိုရွေးချယ်ခြင်း။
၀ န်ဆောင်မှုပေးသည့် ၀ က်ဘ်ဆိုက်မှတဆင့်၎င်းကိုလွယ်ကူစွာလုပ်နိုင်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ငါတို့သည်ဤအဘို့အအခြားနည်းလမ်းနှစ်ခုတင်ပြသွားကြသည်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မိုဘိုင်းဖုန်း၊ တက်ဘလက်၊ ကွန်ပျူတာကနေကောင်းကောင်းလုပ်နိုင်တယ်။ ကျနော်တို့အင်တာနက်ဆက်သွယ်မှုကိုသာလိုအပ်ပါလိမ့်မယ်, နှင့်စာရွက်စာတမ်းကိုဝေ။
ကျနော်တို့မိတ်ဆက်ပထမ ဦး ဆုံး tool ကိုဟုခေါ်သည် PDF2GO။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့တွင်ဝက်ဘ်ပေါ်တယ်ဖြစ်သည် PDF စာရွက်စာတမ်းများကိုပြုပြင်ရန်နှင့်ကိုင်တွယ်ရန်အဆုံးမဲ့ကိရိယာများ။ ၎င်း၏ပြောင်းလဲမှုများအနက်, ၏ပြောင်းလဲခြင်းခွင့်ပြုအပြင် Word မှ PDF သို့ y အပြန်အလှန်အားဖြင့်တည်းဖြတ်ခြင်း၊ ပြောင်းလဲခြင်းနှင့်အဓိကအားဖြင့်၊ PDF စာရွက်စာတမ်းများကိုအပိုင်းများစွာ ခွဲ၍ ခွင့်ပြုလိမ့်မည်.
PDF ကို Word အဖြစ်ပြောင်းနည်း
လိုက်နာရမည့်အဆင့်များသည်အလွန်ရိုးရှင်းပြီးကလေးကစားခြင်းဖြစ်သည်။ ကျနော်တို့သာဝင်ရောက်ဖို့ရှိသည်လိမ့်မယ် PDF2GO ၀ ဘ်ဆိုဒ် နှင့်၏ option ကိုရှာဖွေပါ « Split PDF »။ သင်နှစ်သက်လျှင်တိုက်ရိုက်ရယူနိုင်သည် ဒီ link ကိုသုံးနိုင်သည်။ ၎င်းကိုကျွန်ုပ်တို့ရရှိသည်နှင့်၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့သိနှင့်ပြီးသော tool ၏ရည်ရွယ်ချက်ကိုအတိုချုပ်ရှင်းပြလိမ့်မည်။ ကျနော်တို့တတ်နိုင်သမျှအဝါရောင်အတွက်နေရာတစ်ခုရပါလိမ့်မယ် ကျွန်တော်တို့ရဲ့စာရွက်စာတမ်းဆွဲသို့မဟုတ် select လုပ်ပါကျွန်ုပ်တို့၏ကွန်ပျူတာပေါ်တွင်၊ Google Drive၊ Dropbox တွင်ဖြစ်စေ၊ မည်သည့်ဝဘ်လိပ်စာတွင်ဖြစ်စေရှိမရှိ။
ဖိုင်ကိုဝဘ်သို့တင်ပြီးသည်နှင့်၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့အားဖြစ်နိုင်ခြေကိုပေးလိမ့်မည် ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့အပိုင်းကိုရွေးပါ။ ကျနော်တို့တ ဦး တည်းအကြားရွေးချယ်နိုင်သည် စာမျက်နှာဌာနခွဲအားဖြင့်စာမျက်နှာတစ်ခုချင်းစီကိုမတူညီသောစာရွက်စာတမ်းများဖြင့်ခွဲခြားခြင်း (သို့) က ထုံးစံဌာနခွဲ, mouse ကိုညွန်ထားပါကျနော်တို့ခွဲခြာသွားချင်ဘယ်မှာစာမျက်နှာနှစ်ခုအကြားကိုကလစ်နှိပ်ပါ။
ကျွန်ုပ်တို့သည်မည်သည့်ခွဲခြားခြင်းအမျိုးအစားကိုရွေးချယ်သည်နှင့်တပြိုင်နက်အောက်ခြေတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်တတ်နိုင်သောခလုတ်များဆက်ရှိနေလိမ့်မည် အပြောင်းအလဲများကိုကျူးလွန်ခြင်းနှင့်စာရွက်စာတမ်းသိမ်းဆည်းပါ ကျွန်ုပ်တို့ရွေးချယ်ထားသည့်အစိတ်အပိုင်းများတွင်၊ ခွဲထားခြင်းကိုပယ်ဖျက်ပြီးစာရွက်စာတမ်းရွေးချယ်ရေးစာမျက်နှာသို့ပြန်သွားပါ။ သို့မဟုတ်စာမျက်နှာများအားလုံးကိုခွဲပါ။ တစ်ခုချင်းစီကိုသီးခြားစာရွက်စာတမ်းဖြစ်စေပါ။ ကျွန်ုပ်တို့ခွဲဝေလိုသောစာမျက်နှာများကို ရွေးချယ်၍ စတင်ရန်ဌာနခွဲကိုပြန်လည်သတ်မှတ်နိုင်သည်။
အပြောင်းအလဲများကိုသိမ်းဆည်းရန်ရွေးစရာကိုကျွန်ုပ်တို့ရွေးချယ်ပါက၎င်းကိုမျက်နှာပြင်အသစ်သို့ခေါ်ဆောင်သွားပါလိမ့်မည် ကျွန်ုပ်တို့၏ PDF ကိုမည်သည့်အပိုင်းများခွဲထားသည်ကိုပြပါလိမ့်မည်။ အပိုင်းတစ်ခုစီ၏အမည်ကိုမူလအမည်ဖြင့်ဖွဲ့စည်းလိမ့်မည်၊ ၎င်းကိုဖွဲ့စည်းထားသောစာမျက်နှာများကိုအောက်တွင်ဖော်ပြထားသည်အတိုင်းထည့်သွင်းလိမ့်မည်။
ရွေးချယ်ခြင်းအကွက်များနှင့်အတူကျွန်ုပ်တို့သည်မည်သည့်ဖိုင်များကိုဆက်လက်တည်းဖြတ်လိုသည်ကိုရွေးချယ်နိုင်သည်၊ အခြားတစ်ဖက်တွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဌာနခွဲကိုကောင်းသောအဖြစ်လက်ခံပြီးပါက ကျနော်တို့တစ် ဦး ချင်းစီအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုချင်းစီကို download လုပ်ပါ နာမည်တစ်ခုစီ၏ညာဘက်တွင်အစိမ်းရောင်ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ။ သို့မဟုတ်ချုံ့ထားသောဖိုင်ကို download လုပ်ပါ အထဲတွင်စာရွက်စာတမ်းအပေါငျးတို့သအစိတ်အပိုင်းများနှင့်အတူ။ ကျွန်ုပ်တို့သည်စာရွက်စာတမ်းများစွာကိုအပိုင်းများစွာ ခွဲ၍ ၎င်းကိုတစ်ကြိမ်တည်းလုပ်စရာမလိုဘဲကလစ်တစ်ချက်တည်းဖြင့်ဒေါင်းလုပ်လုပ်လိုပါကဤရွေးချယ်မှုသည်အသုံးဝင်သည်။
SmallPDF သည် အလွန်ဆင်တူ tool ကို, ပုံစံနှင့်အကြောင်းအရာအတွက်, PDF2GO ရန်။ PDF ကိုတည်းဖြတ်သည့်အခါကျွန်ုပ်တို့အားအခြားဖြစ်နိုင်ခြေများကိုကမ်းလှမ်းခြင်းအပြင်၎င်းသည်စာရွက်စာတမ်းများကိုအပိုင်းများစွာခွဲခြားရန်အခွင့်အလမ်းပေးသည်။ ငါတို့လိုချင်သောစာမျက်နှာများကို၎င်းမှထုတ်ယူပါ.
ကျနော်တို့သာလုပ်ရမယ်ကြောင့်, ၎င်း၏စစ်ဆင်ရေးအလွန်ဆင်တူသည် သင့်ဝက်ဘ်ဆိုက်ကိုဝင်ရောက်ကြည့်ရှုပါနှင့် ကျွန်ုပ်တို့ရှာပါလိမ့်မည်ခရမ်းရောင် box ထဲမှာစာရွက်စာတမ်း drop သို့မဟုတ်ရှာဖွေပါ.
ဖိုင်ကိုရွေးပြီးသည်နှင့်တပြိုင်နက် ကျွန်တော်တို့ကိုနှစ်ခုအခြေခံရွေးချယ်စရာခွင့်ပြုပါလိမ့်မယ် ရွေးချယ်ဖို့သူတို့တွင်။ ငါတို့လိုချင်ရင်ရွေးချယ်နိုင်တယ် စာမျက်နှာတစ်ခုစီကို PDF သို့ထုတ်ယူပါသို့မဟုတ် ကျွန်ုပ်တို့မူလဖိုင်မှခွဲယူလိုသည့်စာမျက်နှာများကိုရွေးချယ်ပါ.
ကျွန်ုပ်တို့၏လိုအပ်ချက်များနှင့်အကိုက်ညီဆုံးရွေးစရာကိုရွေးချယ်ပြီးသည်နှင့် ကျနော်တို့ခြေလှမ်းများကိုလိုက်နာပါလိမ့်မယ် tool ကဒါကိုအလိုလိုသိနေတယ်။ အကယ်၍ ကျွန်ုပ်တို့သည်စာမျက်နှာများကိုထုတ်ယူရန်ရွေးချယ်ပါက၎င်းကိုလုပ်ရန်နည်းလမ်းသည်ရိုးရှင်းပါသည် စာရွက်စာတမ်းနှင့်ကျွန်ုပ်တို့သီးခြားခွဲထုတ်လိုသောစာမျက်နှာများကိုနှိပ်ပါဖိုင်တွဲများကဲ့သို့ခရမ်းရောင်ဖြင့်အရိပ်ရလိမ့်မည်။ PDF Divide ကိုနှိပ်ပြီးစက္ကန့်အနည်းငယ်အကြာတွင် download စာမျက်နှာသို့ပို့ဆောင်ပေးလိမ့်မည်။
ဒေါင်းလုပ်စာမျက်နှာပေါ်တွင်တစ်ချိန်ကရွေးချယ်မှုများသည်အလွန်အခြေခံကျပြီးရိုးရှင်းပါသည်။ ကျွန်တော်တို့ကိုကမ်းလှမ်းပါလိမ့်မယ် တိုက်ရိုက် download ခလုတ်ကိုဖိုင်၏အမည်ဘေးတွင်ပထမတစ်ခုနှိပ်ပြီးသောအခါ၎င်းနှင့်အတူ ဖိုင်ကိုကျွန်ုပ်တို့၏ကွန်ပျူတာသို့တိုက်ရိုက်ကူးယူပါလိမ့်မည်။ နောက်စာအိတ်တစ်ခု၏အိုင်ကွန်ကိုရှာပြီးကျွန်ုပ်တို့အားရွေးချယ်ခွင့်ပေးသည် e-mail မှတဆင့်မျှဝေသို့မဟုတ်စာရွက်စာတမ်းတစ်ခု link ကိုဖန်တီးပါ မျှဝေဖို့ထုတ်ယူ။ ဒီ icon နှစ်ခုနဲ့အတူကျွန်တော်တို့မှာရွေးစရာတွေရှိလာလိမ့်မယ် မှတ်တမ်းကိုကျွန်ုပ်တို့၏ Dropbox သို့မဟုတ် Google Drive အကောင့်သို့တိုက်ရိုက်သိမ်းပါနောက်ဆုံးမှာတော့ကျွန်တော်တို့မှာရွေးချယ်စရာတွေရှိလာမှာပါ စာရွက်စာတမ်းကိုပြန်လည်တည်းဖြတ်ပါသို့မဟုတ်လုံးဝပြန်လည်ပါ ၀ င်ပါ.
သင်တွေ့ခဲ့သည့်အတိုင်း၊ PDF ကိုခွဲဝေခြင်းသည်aအလွန်ရိုးရှင်းတဲ့ဖြစ်စဉ်ကို လက်ျာကိရိယာများရှိခြင်း။ ကျွန်ုပ်တို့အင်တာနက်ဆက်သွယ်မှုနှင့်သာခွဲဝေလိုသောဖိုင်ရှိရန်သာလိုအပ်သည်။ ဤရိုးရှင်းသောကိရိယာများကို အသုံးပြု၍ ကျွန်ုပ်တို့ကွန်ပျူတာ၊ မိုဘိုင်းဖုန်းသို့မဟုတ်တက်ဘလက်များမှပြုလုပ်လိုသည်ဖြစ်စေမခွဲခြားဘဲအလျင်အမြန်လွယ်ကူစွာမည်သည့်နေရာတွင်မဆိုမျက်လုံးတိတ်ဆိတ်စွာလုပ်ဆောင်နိုင်သည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Gadget သတင်း » ယေဘုယျ » PDF ကိုဘယ်လိုခွဲရမလဲ
ဤစိတ်ကူးကမ်းလှမ်းမှုများနှင့်အတူ Amazon သည်နွေ ဦး ရာသီစတင်သည် (27-03-2019)
Huawei P30 အမှတ်တံဆိပ်၏အဆင့်မြင့်သစ်ကိုပထမဆုံးတွေ့မြင်ခဲ့ရသည်